Akunakwenzeka ukuthi kuyoba nesenzakalo lapho izimbali zizobe zingalungile. Kuzo zonke iholidi, futhi ngaphandle kwesizathu, sinika izimbali kubesifazane namadoda, abalingani bebhizinisi kanye nezingane, abasanda kushada nabantu abaseduze. Kodwa ukuze isixha sinikeze imizwelo emihle nangenjabulo, kubalulekile ukugcina umkhuba wokunikeza izimbali kahle.
Muva nje, ukunikeza izimbali ezigoqwe ngokupakishwa kokufaka, kwakubhekwa njengefomu elibi. Manje isetshenziswe ekuhlakanipheni kwakho - uma ufisa, ungayisusa, kodwa noma ngabe unquma ukushiya le phakheji, akekho ozokusho izwi kuwe. Ukuze uthole emaphaketheni ombala omuhle, kungcono ukusebenzisa imibala efudumele kanye nephepha eliphakeme lelayisi. Ngakho izimbali zizobukeka ziqine kakhulu futhi zangempela.
Okokuqala, kufanele wazi ukuthi kuyadingeka ukuthwala isixha nge-buds phansi, ukuze izimbali zingaphuli emoyeni futhi zingapheli ukubonakala kwazo. Uma owesifazane eya eholidini noma eminye imikhosi enomuntu, bese ecabangela ukuziphatha, izimbali kufanele zinikezwe ngokuqondile. Kulesi simo, owesifazane kufanele athathe isixha noma ibhasikidi lezimbali kule holide. Badluliselwa ezandleni zabantu kuphela endaweni yokufika komkhosi (esiteshini noma kwi-foyer). Uma kwenzeka intombazane yokuzalwa ingumuntu, izimbali zenziwa owesifazane. Uma owesifazane nendoda bemenywa emkhosini, lo mkhuba uhlinzeka izimbali kumuntu owenza umkhosi kuphela ngemva kokuba abesifazana bebingelela.
Uma umenyiwe ukuvakashela izihlobo, abangane noma obajwayele, khona-ke ukwakheka kwembali kufanele kuhanjiswe kumuntu ohlala naye. Uma izimbali sezilungiselelwe indoda, khona-ke kumele zihanjiswe ku-hostess. Ukuhambisa i-hostess ukulungiswa kwembali, udinga ukwenza umnsalo omncane bese uthi amagama ambalwa amnandi.
Ngesikhathi sokubelethwa komuntu, kufanele abambe ngesandla sakhe sokunxele, ukuze ilungelo likhululeke ngokuphelele. Kodwa ngokushesha nje lapho inkulumo ehalalisayo isiphelile, isixha sishintsha ngakwesokunene futhi sinikezwe kahle. Khumbula ukuthi izitshalo zokwakheka kufanele zibukeke phansi phansi, futhi nokuthi i-bouquet ehlelwe kahle yenza ukuba khona kwekhadi lekhadi noma ibhizinesi lebhizinisi. Lokhu kusebenza kuwo wonke amaholide, kufaka phakathi amaqembu ezinkampani. Kungenxa yamakhadikhadi anjalo lapho umamukeli efunda khona kusuka kuye izimbali ezinhle kangaka.
Ungakhohlwa mayelana nesimiso sombala. Izimbali ezibomvu zivame ukunikezwa engxenyeni yesibili nabathandekayo, futhi ama-shades afudumele afanele ukuhalalisela noma yimuphi umuntu. Zifanekisela ukuvuleka nenhlonipho. Ezinganeni, izinhlobo ezifingqiwe zezingoma ezithandweni ze-orange ne-yellow zifanelekile kakhulu. Kukhona nomzuzwana onjalo: abesifazane bangcono ekunikezeni izingqungquthela zomjikelezo, futhi kumadoda, izimbali ezenziwe ngendlela efakwe kancane.
Uma unquma ukuthumela isixha kusuka esitolo ngokubeletha, kuyoba kuhle ukukunika ngendlela enjalo - faka ibhizinesi lakho lebhizinisi noma ikhadi lokubingelelana ngezifiso ebhasikisini lezimbali noma i-bouquet ekulungele.
Indlela yokukhetha izikali eziphansi
Ithembo Elihle Lezivakashi
Indlela ozenza ngayo emva kwekhefu elide
I-Singer Cher: Biography
Uju - umkhiqizo wezokwelapha obaluleke kakhulu
Amathoyizi ezemfundo ezinganeni ezimpumputhe
Senza massage jikelele classic
Iresiphi ye "Herring ngaphansi kwengubo yoboya" yoNyaka Omusha enezithombe namavidiyo esinyathelo ngesinyathelo. I-recipe yangempela eneqanda, iresiphi entsha ngama-apula, isaladi "roll" nezinye izinguqulo zonyaka omusha
Apple pie nge omisiwe
Kuthiwani uma ingane inesifo sengculaza esibuthakathaka?
Izimpawu kanye nokudla okunempilo kwe-arthritis
Izifo zokuvuvukala zesono ezingasese